i-CSA ne-SLC bamemezela uhlelo lama-Proteas lihambela e-Sri Lanka
Namhlanje i-Cricket South Africa (CSA) ne-Sri Lanka Cricket (SLC) bamemezele izinhlelo zohambo lama-Standard Bank Proteas beyovakashela e-Sri Lanka komunye uhafu ka-2018. Ohambweni kuzodlalwa ama-Test amabili, ama-One Day International ne-T20 International eyodwa.
"Kuzoba i-tour ebalulekile kithina le," kuphawula i-CSA Acting Chief Executive u-Thabang Moroe. "Sinabadlali abaningi abancane abangena eqenjini lethu kuzona zontathu izinhlobo zekhilikithi futhi njengoba iningi ikhilikithi yezwe edlalwayo kwi-sub-continent kulezinsuku kubalulekile ukuthi bajwayele isimo salapho ngokushesha."
“Iningi labo badlale ikhilikithi encane ngale futhi abanye abakaze. Uma ubheka, siyibheke ngamehlo okhozi imidlalo ye-Test match spinner yethu, u-Keshav Maharaj, okusamele adlale umdlalo we-Test kwi-sub-continent.”
“i-ODI Series izoba ingxenye ebalulekile ekuzilungiseni kweqembu lethu lilungiselela i-2019 ICC World Cup e-England ngonyaka ozayo.”
“i-Sri Lanka ibihlezi iletha iqembu elinzima uma idlalela ekhaya futhi nginesiqiniseko sokuthi angeke kushintshe lokho kuloluhambo. Sonke silindele ikhilikithi enokuqhudelana,” esho evala u-Mr. Moroe.
u-Philander uqede i-Australia ekuseni osukwini lokugcina i-CSA ihalalisela ama-Proteas ngokugubha umlando benqoba i-Test series bedlala ne-Australia u-Bavuma uhlelela ama-Proteas usuku olukhulu u-Markram ubekela ama-Proteas isikhonkwana ngaphambi kokuthi i-Australia iziphindiselele Ama-Proteas afuna ukumvalelisa kahle u-Morkel Ubuhlakane bukaMorne kuhola ukunqoba okukhulu kwama-Proteas nokuba u-Morkel ufinyelela ku-300; uhlelela ama-Proteas ukuba ngaphambili i-CSA ihalalisela u-Morne Morkel ngokungena kwiqembu lo-300 u-Cummins uguqula izinto emuva kwekhulu lika-Elgar elinike i-CSA yamukela uphumela wesicelo Ikhulu lika-AB ligqugquzelela umsila njengoba ama-Proteas ehamba ngaphambili